घुम्दै–फिर्दै प्रतिष्ठानमै उपचार « Farakkon
घुम्दै–फिर्दै प्रतिष्ठानमै उपचार
घोराही, फागुन २६ । उनको उपचारमा काठमाडौंको हेम्स हस्पिटलमा ४ लाख खर्च भयो, तर न समस्या पहिचान भयो, नत रोग विशेक भो । कोहलपुरको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा पुगिन ७ दिन भर्ना हुँदा उनको ९० हजार खर्च भयो, तर पनि विशेक भएन । तर उनले अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भएपछि भने पुरै रोग निको भएको अनुभूति गरिसकेकी छन् । स्थायी बसोबास तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का शेरबहादुर बुढाथोकीले घोराहीमै थोरै खर्चमा सफल शल्यक्रिया सम्पन्न भएकोमा खुसीसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
‘आफ्नै घरछेउको अस्पतालका विषयमा अनेकथरी प्रचार हुँदा धेरै पैसा अन्तैका अस्पतालमा खर्च गर्नुप¥यो, यति सहज र सस्तोमा उपचार सेवा उपलव्ध गराएकोमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु’, बुढाथोकीले भने । उनको सफल शल्यक्रिया सहितको उपचार वरिष्ठ नाक, कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. बिक्रम बुढाथोकीले गरेका हुन् । उनले प्रतिष्ठानमा शल्यक्रियासहितको सबै उपचारसेवा जम्मा १२ हजार रुपैयाँमा पाए । यो खबर अब तुलसीपुरका सबै आफन्तलाई बताउने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘नजिकको तीर्थ हेला भन्याजस्तै ठूला डाक्टर खोज्न नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौंको नाम चलेको अस्पतालमा समेत पुगें, तर त्यहाँ त पैसा झार्ने काम मात्रै भयो, रोग निको भएन’, शेरबहादुरले भने– ‘एकपटक प्रतिष्ठानका डाक्टरलाई पनि देखाउन भन्दै यहाँ आएको थिएँ ।’ राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउँदा उनलाई पुरानो पिनासले सताइरहेको थियो । टाउको दुखेर सहनै नसक्ने, हेर्नै नसक्ने आँखा सुन्निएका थिए । नाकको डाँडी पनि सुन्निएर सहनै नसक्नेगरी दुख्थ्यो । ओपिडीको टिकट लिएर उनी डा. बिक्रमको सम्पर्कमा पुगे । चिकित्सक र नर्सको टोलीले चेकजाँच गरी उनको जटिल प्रकारको पिनासको सफल उपचार ग¥यो ।
आँखा र नाक सुन्निँदा आँखा देख्न नसक्ने र श्वास–प्रश्वासमा पनि समस्या हुँदै गएको थियो । तर उनी अहिले सजिलै आँखा हेर्न सक्ने र हिँड्डुलसमेत गर्न सक्ने भएका छन् । प्रतिष्ठानले पछिल्लोपटक नाक, कान घाँटीका बिरामीहरुलाई शल्यक्रियासहितको स्वास्थ्य उपचारसेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । त्रिविबाट गोल्डमेडलसमेत पाएका चिकित्सक बिक्रम बुढाथोकीले प्रतिष्ठानमा यो सेवा दिइरहेका छन् ।
साथमा एनेस्थेसियाका विशेषज्ञ र तालिमप्राप्त नर्सिङ स्टाफहरुले पनि उनलाई सघाइरहेका छन् । प्रतिष्ठानमा अहिले घाँटीको स्वरयन्त्र फाटेका बिरामीहरुको भिडियो एक्सरेलगायतका आधुनिक प्रविधिका सेवासमेत उपलव्ध रहेका छन् ।
नाक, कान घाँटीसँगै प्रतिष्ठानमा अहिले हाडजोर्नीका जुनसुकै समस्याको पनि सफल शल्यक्रियासहित उपचार हुन थालेको छ । शल्यक्रियामा स्टील रड राख्ने भन्दा थप जटिल लिम्फमा कृतिम हिप प्रत्यारोपण समेत हुने शल्यचिकित्सकले बताएका छन् । त्यसैगरी पाठेघरमा रहेको सिस्टको समेत सफल शल्यक्रिया हुन थालेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
हाइड्रोसिल, प्रोस्टेट, पत्थरीलगायतको पनि दूरबीन प्रविधिबाट शल्यक्रिया हुन थालेको छ भने दाँतको पनि सफल उपचार सेवा प्रतिष्ठानमा उपलब्ध छ । हाल दिवा सेवामा सीमित रहेको प्रसूति सेवालाई पनि चौबीसै घण्टा शल्यक्रियासमेत गरिनेगरी तयारी गरिरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यद्यपि सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनका लागि भने पर्याप्त बजेट उपलव्ध गराउन सकेको छैन ।
अन्य प्रतिष्ठानहरुको तुलनामा नगन्य बजेट सरकारले उपलव्ध गराउँदा आवश्यक आधुनिक उपचार सामग्रीहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको बार्षिक पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक बर्षमा ३ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भए आइसियु सेवा सहित सिटीस्क्यान सेवा र एमआरआई सेवासमेत प्रतिष्ठानले उपलव्ध गराउने जनाएको छ ।
सरकारले मृगौला रोगीहरुका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलव्ध गराउने नीति लिए पनि प्रतिष्ठानमा पर्याप्त जनशक्ति र डायलासिस गर्ने मेसिन उपलब्ध हुन नसक्दा डायलासिस गर्न आएका बिरामीहरुलाई पनि अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ ।